Shiinaha Soosaaraha Eyga Soosaaraha iyo Alaab-qeybiye | Mujiang
1.Qeebaha aagga eyga
Eyga tuubada ayaa ordaya diyaarna u ah in la isticmaalo, fududahay in la maareeyo, tuubo adag oo adag.
Albaab isku dhafan oo leh xiritaan aamin ah.
Daaweynta wajiga eey
Galvanized korontada ama kulul lagu rusheeyey galvanized waa habka loo codsado daahan zinc difaaca bir ah ama
birta, si looga hor tago miridhku. In kasta oo galvanization lagu samayn karo kiimikada korontada iyo geedi socodka dhigaalka korantada, habka ugu caansan ee hadda loo isticmaalo waa galvanized kulul-maquufin, kaas oo qaybo bir ah
waxay ku quusayaan qubeyska zinc la shubay.
3.Prootegoos gooska eyga
Doorashada qol eey waxay ku siin kartaa xal deg deg ah oo la awoodi karo si aad ugu siiso saaxiibkaaga ugu fiican guri amaan ah oo uu ku nasto. Sidoo kale aqalkeena eygu wuxuu bixiyaa dhisme heer sare ah iyo dhameystir qurxoon oo muuqaal leh, ama waxaad la tagi kartaa labada guddi ama khadadka sanduuqa leh; qafis kasta oo bixiya miridhku u adkaysta, dhismaha birta galvanized iyo fudayd-of-ururinta.
Hore: Zinc iyo Xayndaabka Birta
Xiga: Qoryaha adag ee alwaaxda lagu dubo ee loogu talagalay albaabka fidsan